UK Caddaynta Xaqiijinta | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Blog Xaqiijinta Da'da
adminaccount888 10th April 2019 News Latest
Kiisaska loogu talagalay xaqiijinta da'da loogu talagalay goobaha jimicsiga
Tani waa boostada blog-ka ah ee wargelinta ku saabsan sharciga ku saabsan xaqiijinta da'da John Carr. John waa xubin ka mid ah Guddiga Sare ee Golaha Golaha Ingiriiska ee Amniga Ilmaha, Waaxda La-talinta ee Dawlada Ingiriiska ee amniga iyo ammaanka internetka ee caruurta iyo dhalinyarada. Post ayaa halkan ka muuqata.
"Waxay ku xiran tahay tirada emaylka iyo wicitaanka telefoonnada ee aan helayo, adduunka oo dhan waxaa jira xiiso sii kordheysa oo ah waxa UK ay sameyneyso si loo yareeyo suurtogalnimada in carruurtu ay soo gaadhay goobaha shabakada pornographic.
Gaar ahaan dadku waxay rabaan inay ogaadaan xeeladaha iyo doodaha loo isticmaalay si ay u helaan sharciga ku saabsan buugga sharciga ee halkan Ingiriiska
Sidaa darteed waa maxay soo koobid. Fadlan waxaad dareemeysaa lacag la'aan inaad ku darto, la qabsato, wax ka beddesho ama ka tagto mid ama dhammaanba si aad ugu habboonaato xaalada degaankaaga. Ma jiro hal ama hab sax ah. Mawduucda deegaanka marwalba waa muhiim. Dhammaanteen waa inaynu helnaa waddadayada.
Ururada carruurta iyo danaha carruurta ayaa ka soo horjeeda horraantii
UK gudaheeda waxaan leenahay tiro ka mid ah ururada carruurta ee aadka u ballaaran ee aad loo yaqaan. Qaar ka mid ah jumlado badan oo shaqeynaya kumanaan dad ah waxayna raadsan karaan jihooyinkooda ku celiska ah 19th Century. Waxay haystaan ​​macaamiliin royal ah, waa kuwo aad loo ixtiraamo oo ixtiraam leh, badanaa leh khibrad caalami ah oo la aqoonsan yahay oo ku saleysan daryeelka caruurta, horumarinta ilmaha, ilaalinta iyo arrimaha waxbarashada. Intaa waxaa dheer - oo tani waxay ahayd mid aad u muhiim ah - waa si qarsoodi ah. Siyaasadda internetka waxay wada shaqeeynayaan isbahaysi si gaar ah loo dhisay oo ka jiray tan 1999. Anigu waxaan ahay Xog-hayaheeda.
Waxaan ahaa 100% pragmatic waxaana si buuxda diiradda u saarnaa dhibaatada carruurta. Runtii waxaan taageero ka helnay kooxo diimeed iyo kooxo diimeed, waana la soo dhaweeyay, laakiin ma aysan ku lug laheyn qaabaynta xeeladaheenna, istaraatijiyadeena ama fariinta.
Dhibaato ma dheheen waxaan u maleyneynaa in dhammaan porn-ka ay xun yihiin, lakiin waxanu ku tilmaamnay in dad badan oo badanaa laga yaabo inay fikrad yar ku qoraan waxa ay porno internetka maanta u eg tahay sida badanaa waxay muujinaysaa rabshadaha ka dhanka ah dumarka iyo waxay kor u qaadeysaa fikrado aan caadi ahayn oo ku saabsan galmada iyo xiriirada.
Xeerka dhaqaalaha Digital, 2017 ayaa aasaasay meelo qarsoodi ah oo ganacsi oo ku baahsan UK oo ah inay soo bandhigaan tallaabooyinka xaqiijinta da'da si loo xakameeyo helitaanka carruurta. Goobaha loo yaqaan "free" ayaa ah bartilmaameed muhiim u ah sharciga. Kuwani waa, run ahaantii, ganacsiyada aadka u guulaystay. Kama iibsanayaan albaabka, si ay u hadlaan, waxay ku soo aruuriyaan dakhligooda siyaabo kale.
Sharciga cusub wuxuu u shaqeyn doonaa dhamaadka sanadkan. Waxaa jira laba maamulayaal.
Waa maxay porno?
Guddiga Kala Duwanaanta Filimada Ingiriiska (BBFC) wuxuu leeyahay kaalinta koowaad ee dejinta. UK gudaheeda BBFC waa mid aad u caan ah oo lagu kalsoon yahay. Urur madaxbannaan oo jirey muddo ka badan sanado 100, ganacsiga BBFC ayaa falanqeynaya, kala saarista iyo sharaxa nooc kasta oo ka mid ah, oo ay ka mid yihiin pornography. Waxay leedahay howsha ilaalinta ilmaha.
Waxqabadka maamulaha ee BBFC waa in la go'aamiyo iyo in goobaha u qalmidda ay keeneen tallaabooyinka xaqiijinta da'da da'da ee shaqeynaya. Haddii aysan haysan BBFC waxay leedahay qalab kala duwan oo ay u isticmaalaan si ay u dhiirigeliyaan u hoggaansamida. Ugu dambeyntii BBFC waxay leedahay awood sharci ah oo loogu baahan yahay ISPs iyo bixiyeyaasha kale ee helitaanka si loo xakameeyo goobaha aan ku habboonayn. Looma maleynayo in awooddan xannibista loo isticmaali doono marar badan sababtoo ah goobaha ay u badan tahay inay u hoggaansamaan. Haddii aysan sameynin dakhligooda waa la garaaci doonaa. Waxay si qoto dheer uga taxadaraan dakhliga.
Dhab ahaantii xaqiiqda sababtoo ah goobaha porno waxay awood u yeelan doonaan inay damaanad qaadaan inay dhageystaan ​​dhagaystayaal waawayn oo ku yaal Boqortooyada Midowday (UK), shirkadaha xayawaanka ah ayaa laga yaabaa inay xitaa helaan faa'iido badan. Waxay u baahnaan doonaan bandwidth yar si ay u adeegaan goobahooda iyo tan iyo markii ay martida ay heli doonaan lacag iyo habka loo isticmaalo, xayeysiisku waxaa laga yaabaa inay diyaar u yihiin bixinta dheeraad ah. Tani waa tusaale ka mid ah caqiidada aan caqli-gal ahayn ee shaqada. Hey ho.
Asturnaanta waa muhiim
Xakameynta kale ee maqaarka ee ciyaarta waa Xafiiska Wakiilka Macluumaadka (ICO), hay'adda ilaalinta xogta UK. Hawsheedu waa inay xaqiijiso xalinta da'da da'da xaqiijinta xuquuqda asturnaanta dadka.
Mabda'a sharciga ah ee muhiimka ah waa xog yaraynta xogta macnaheedu yahay waxa kaliya ee soo-saaraha jilicsani u baahan yahay inuu ogaado ama haddii qofku rabo inuu galo boggooda ayaa si sax ah loogu xaqiijiyay inuu yahay 18. Qaar badan oo shirkado ah ayaa u soo baxaya si ay u bixiyaan adeegyada xaqiijinta da'da oo loo adeegsan karo badeecooyin waaweyn iyo adeegyo qaangaar ah, oo aan ahayn porno, tusaale ahaan khamaarka, iibinta khamriga, tubaakada iyo mindiyaha. Sidaa daraadeed, iyada oo la marayo hannaanka caddaynta da'da ayaa kuu calaamadeyneysa inaad tahay porno. Waxay muujinaysaa inaad mararka qaarkood la xiriiri karto waxyaabo kala duwan oo la xiriira xanibaada da'da.
Goobaha Porn uma baahna inay ogaadaan ama ku hayaan magacaaga, da'daada dhabta ah, cinwaankaaga ama lambarka kaarka deynta. Dhamaan goobaha ladaga baahan yahay in ay ogaadaan waa in buuggan gaar ah lagu xaqiijiyey inuu ka tirsan yahay 18 ama ka sareeya. Sidaa daraadeed, nidaamka cusub ayaa loo arki karaa inuu yahay mid sir ah oo lagu hormarinayo dhowr siyood.
Helitaanka heshiis si ay u dhaqmaan
Mawqifka ugu horreeya ee siyaasadeed: tallaabadu waxay ka soo baxday Baarlamaanka Boqortooyada Ingiriiska iyada oo taageero ka heshay Dhammaan Xisbigii Si kastaba ha ahaatee, waa in la sheegaa in lagu guuleysto taageerada shakhsi ahaaneed iyo ka qaybgalka ra'iisul-wasaarihii hore waxa ay muhiim u tahay helitaanka kubbadda. Ma ahan isaga ama isaga laftiisa isku dayey in uu isticmaalo habdhaqanka si loola dhaqmo iyo ilaalinta caruurta sida macne dhibcood ee dhibcaha iyo xisbiyada mucaaradka waxay meel mariyeen meel la mid ah. Tani waxay ahayd muhiim. Haddii qiyaasta qabyada ah ay noqoto mid si weyn loo sifeeyo siyaasadda Xisbiyada waxay u badan tahay inay ku guuldareysteen.
Qodobka labaad ee siyaasadeed ee siyaasadeed: in lagu ololeynayo qiyaasta aan helnay taageerada wargeysyada waaweyn, wargeysyada guud iyo baarlamaanka dhexdiisa gudniinka dumarka hibo leh Xildhibaanadu waxay waqti badan iyo awood ku siiyeen mawduucan dhowr sano.
Iyadoo aaney jirin wax shaki ah ama ku kalsoon in Ra'iisul Wasaaruhu iyo siyaasiyiin kale u hoggaansamaan mabda'a ka dambeeya qiyaasta xaqiiqda wax khasaare ah kama aysan keenin sababtayada aan u helno taageerada joogtada ah ee warbaahinta waaweyn.
Waa inaad dhageysataa dhinaca kale
Kooxaha xoriyada hadalka iyo kooxaha xuquuqda madaniga ah ayaa si aad ah ugu lug lahaa isku dayga ah in ay helaan tallaabada laga adkaaday ama la dhuftay. Taasi waa shaqadooda. Waa labadaba khaldan oo aan lid ku aheyn si ay u muujiyaan iyaga oo ah kuwo aan caqli-gal ahayn, kuwa aan nihilisticiska ah ee aan daryeelin carruurta. Badidoodu badidoodu waxay daryeeli karaan, laakiin waxay si dhab ah u qabteen boos celin ku saabsan hababka la soo jeediyay. Waa inaan wax ka qabannaa boosaskaas oo aan kaliya ku qaylineynin oo diideynin inay maqlaan. Qaar ka mid ah waxa ay tiradoodu aad u yartahay waxay saameyn ku yeesheen inkastoo aan u malaynayay in dad kale ay aad u dhaqsaan yihiin oo diyaar u yihiin in ay been ka sheegaan waxa socda iyo sababta.
Inkasta oo aan si buuxda u diideynin fikradda ah in carruurta ka ilaalineysa filimmada ay tahay si kasta oo lagu dhiirrigeliyo faafreebka - maaha wax sharci ah oo ku yaal internetka maanta ma joogi doono berrito - waa in la qiraa in mar kasta oo siyaasiyiinta ay ku lug yeeshaan maadooyinka dadkan waxay xaq u leeyihiin inay noqdaan kuwo walwalsan.
Nidaamyada qaarkood iyo tiro kooxo ah ma rabaan qof kasta oo ka mid ah waddankooda, ama meel kasta oo kale oo arrintaan ah, inay awood u yeeshaan inay soo galaan filimada, waxayna yeelan karaan qeexitaan aad u balaadhan oo ah waxa ka muuqda sawir-gacmeedyada. Marnaba kuma doodin dadka waaweyn inaanay xaq u lahayn inay galaan waxyaabaha la xariira filimada.
Dhibaatadeenu waxay ahayd in carruurtu aanay awoodin inay si fudud u helaan.
Qadar yar oo khatar ah ayaa ah mid aan la iska dhaafi karin
Xaqiijinta da'da UK waxay si aan macquul ahayn u abuuri doontaa dhibaato yar, taas oo ah dadka waaweyn waa in ay maraan nidaam, laakiin waxay mar hore ku sameeyaan meelo badan oo kale, online iyo banaan. Waa qiimaha aan lakulmaynin, laakiin qiyaastii qiimaha aan ku filnayn waxaan bixineynaa si aan u gaarno himilooyin bulsho oo macquul ah. Xalalka xaqiijinta da'da ee loo istcimaali karo isticmaalka Boqortooyada Ingiriiska si fudud ayaa loo dhammeystiri karaa. Dalal kale oo leh horumarinta internetka oo si wanaagsan loo horumariyey waxaa laga yaabaa inay xitaa sahlan tahay in la helo xaqiijin in qof uu ka weyn yahay 18.
Qiyaasaha farsamada ma aha mid bedel u ah waxbarashada jinsiga iyo waxbarashada
Xaqiijinta da'da ee goobaha la duubay oo aan ka ahayn goobaha qatarta ah ee loo yaqaan 'Pornographic Sites' MAYA bedelaad ama beddel u ah carruurta iyo dhalinyarada helaya talobixin ku habboon da'da iyo hagista ku saabsan galmada iyo cilaaqaadka, labadaba guriga iyo dugsiga ama runtii adoo isticmaalaya ilo waxbarasho oo aad u diyaarsan oo laga heli karo internetka. Tani waxay sii ahaanaysaa muhiimad muhiim ah
Hase yeeshee, xaqiijinta da'da waa qayb muhiim ah. Inter, waxay ka caawineysaa carruurta in sida, khamriga, khamaarka iyo wixii la mid ah, dadaal culus ayaa la sameeyey si loo xaqiijiyo sharciyada iyo caadooyinka macnahoodu yahay. Talada ay bixiyaan waalidiinta, macallimiinta iyo kuwa kale ee loola jeedo porno maahan kaliya "calaamad muujin". Ma aha wax ay kor u qaadaan adeegga dibnaha iyada oo aan run ahaantii loola jeedo in si dhab ah loo qaato.
Keenista aduunka iyo muuqaal-yada ah ee isku-dhafan
Xaqiijinta da'da loogu talagalay boggaga porno waxay ka caawisaa inay keenaan isku dheelitirka udhaxeeya adduunka iyo jiritaanka farsamada. Ma haysanno hal xeer oo qawaaniin ah iyo filashooyin kuwaas oo meel ku wada qotoma, laakiin maaha kuwa kale.
Dad badani waxay arkeen in internetku yahay tijaabada bulshada ugu weyn taariikhda. Waxaan ku qasbanahay inaan ubadkeena aheyn inaan ku adkeyno in ay yihiin kuwo aan dooneeyn, doofaarro aan qaan-gaarin.
Si aan si ka duwan u dhigno, ma dhihi karno inaan sugeyno sanado 20 si aan u aragno sida wax u noqdaan jiilkan ka hor inta aan go'aan laga gaarin waxa la samaynayo si loo hubiyo in xiga aan wax dhaawac ah la mid ahayn.
Baaritaanka EU-da ee sahankan ee EU Kids ayaa soo baxday iyadoo aysan jirin 1 carruurta caruurtoodu ay ka heleen walxaha qalabka ay ku duuban yihiin internetka.
Heerar kasta waxaa jira caddayn ku filan oo loogu talagalay in loola jeedo in porno ay keeni karto waxyeello weyn carruurta, gaar ahaan carruurta yar yar iyo kuwa nugul. Sidaa daraadeed waa wax aan la aqbali karin in la yiraahdo, sida dhabta ah, waa in aynaan waxba samaynin illaa iyo inta arrintu ka socoto oo ugu dambeyntii degsan tahay oo ka fog shaki macquul ah. Markaa markaa waa la aqbali karaa in la raadiyo yaraynta ama yareyn kara cawaaqibka ay dhici karto in carruurtu ay soo wajahdo porno.
Waxaa jira meelo aad u yar oo ah cilmi-baaris cilmiyeed ama cilmi ah halkaasoo caddaynta aan lagu muransanayn. Haddii aan sugeyno illaa iyo inta uu jiro 100% heshiis waxkasta ah oo aan waligiis isku dayin wax cusub illaa iyo inta ay shaki iiga shaki ka qabaan natiijooyinka laga yaabo in laga yaabo in dhamaanteen ay weli ku noolaanayaan lo'da lo'da ee Rift Valley.
Mabda 'taxadiga ah ayaa sidaas ku qeexaya waa in aan tixgelinno caddaynta suurtagalnimada waxyeellada iyo, ilaa iyo inta laga helayo jiritaanka caddaynta caddaynta, waxaan ku qasbanahay inaan qaadno tallaabooyin si aan uga fogaano cabsida macquulka ah ee waxyeellada la saadaalin karo.
Qofkasta oo u maleynaya inuu porno internetka noqon karo ilo faa'iido leh oo muhiim ah, talooyin ama macluumaad ku saabsan galmada iyo cilaaqaadka si cad uma arkeen mid ka mid ah.
Way fududahay in doodda lagu soo bandhigo xaqiijinta da'da carruurta marka loo eego carruurta yaryar iyo halista shilalka, laakiin xaqiiqda oo dhan 18s waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo oo ay fahmaan meesha xuduudaha ay yihiin iyo sababta ay xudduuduhu u jiraan.
Dhallinta da'yarta ah waxay u badan tahay inay rabaan in ay la shaqeeyaan xijaabka laakiin xaqiiqda ah in ay adagtahay in la gudbo xuduudaha iyo kontaroolada farsamada ayaa ka dhigaysa inay joojiyaan oo ay muujiyaan ayna u badan tahay inay bedelaan nooca khibradooda waxay la kulmaan.
Waxaanu ku raacsanahay in macaamiisha porno ay xaq u leeyihiin in ay si qarsoodi ah u ilaaliyaan.
Xaqiijinta da 'yarta ma ballanqaadayso in ay wax ka qabato shilalka ama si ula kac ah u soo dhaweyneyso nooc kasta oo lebisan meel kasta oo dhan, tusaale ahaan porno laga yaabo in lagu bedelo baaskiil, barnaamijyo fariisin ama foorjarro ama la abuuro iyadoo la isticmaalayo kamaradaha telefoonada. Tijaabinta da'da da 'yarta ayaa wax ka qabta suurtogalka sahlan ee filimada sawirrada ee ay daabacday internetka. Tani waa qaabka ugu habboon.
Nasiib darro ma jiraan wax xabbad lacag ah oo soo galaya meel kasta oo xagal ah, laakiin taasi maahan sabab diidaya in ay wax ka qabato meesha aad saameyn karto.
Xaqiijinta da'da waxay ku saabsan tahay masuuliyada daabacayaasha filimka. Dhammaantood waxay yiraahdaan ma rabaan carruurtu in ay soo galaan alaabtooda, laakiin ilaa hadda wax yar ayay sameeyeen ama waxba kama jiraan inay ka hortagaan.
Tani waxay ahayd sababtoo ah iyaga looma baahna inay xitaa haddii shirkad shakhsiyadeed laga yaabo in ay wax ka qabato waxa ay ka walwalsanayeen in haddii qof kasto uu ku jiro waajibaad isku mid ah inuu ku dhaqmo waqti isku mid ah waxay lumin karaan ganacsiga tartamayaasha yaryar. Tani waa sida dhabta ah sida ay ula shaqeysay khamaarka online ee UK.
Caddaynta da'da waa inaan la geyn ama lagu jahwareerin isticmaalka santuuqa. Qoysaska waxaa laga yaabaa inay rabaan inay isticmaalaan shaandhada si ay u xakameyaan helitaanka dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka ka soo horjeeda qiimahooda ama aanay rabin inay isticmaalaan dhammaantood. Taasi weli ma siinayso daabacaadaha porno xaq u leeyihiin inay daaha ka yar da'da yar ee alaabtooda.
Xitaa haddii qoysku isticmaalo santuuqa guriga waxay caruurtooda ku dhici karaan guryaha saaxiibada ama meelaha kale ee shaandhada aan la isticmaalin. Mar labaad taasi ma siinayso daabacaadaha porno xaq u leeyihiin in ay daaha ka yar da'da yar ee alaabtooda.
Sharciga xaqiijinta da'da dhabta ah wuxuu ku saabsan yahay dhisidda qiime cusub. Waxay tiri ma aha wax sax ah oo loogu talagalay daabacaadaha xaawilada si ay u sameeyaan alaabtooda la heli karo iyada oo aan qaadin tallaabooyin wax ku ool ah si loo hubiyo in carruurtu aanay u arki karin.
Waxa kale oo ay sheegaysaa in xaqiiqooyinka nolosheena casriga ah iyo caqabadaha waalidnimada ee da'da dijitalka ay macnaheedu tahay inay tahay caddaalad darro oo aan macquul ahayn in ay mas'uuliyadeeda kaliya ama waalidkaba siiyaan waalidiinta inay carruurtooda ka ilaaliyaan walxaha aan ku jirin booska koowaad. Wershadaha porno ma aha in ay abuuraan culays dheeraad ah oo loogu talagalay waalidiinta.
Inta ugu badan oo dhan waa in shirkadaha xayawaanka ah ay dareemaan kuwa aan la jilicsaneyn ama aan la xakamaynin fikradda ah inay lacag ka dhigaan inay muujiyaan lulid carruurta.
Dadku waxay ku doodaan caruurta in ay ka soo baxaan wax kasta oo aad isku dayeyso. Taasi waa dood ku saabsan wax aan waxba qabanaynin, si loo ilaaliyo xaaladdaha. Cui Bono? Hase yeeshee caddaynta (eeg bogga 16) waxay soo jeedinayaan in caruurta intooda badan aysan garanaynin sida loo helo xaafadaha iyo xitaa kuwa ka shaqeeya qayb yar (6%) dhab ahaantii way dhibsanayaan.
Waa sheeko ku haboon in ilmo kastaa uu yahay isticmaale internet oo aad u fiican oo garanaya khiyaamooyinka farsamooyinka ee buugga iyo rabo inuu jebiyo xeer kasta ama iska dhaafo xuduud kasta.
Taas ayaa sheegtay in ay muhiim u tahay in la sii wado horumarka farsamada iyo isbeddelka suuqa suuqyada si loo hubiyo in nidaamiyeyaashu ay sii wataan taariikhda iyo munaasabaddana ay ku filan yihiin si ay si deg deg ah wax uga qabtaan istaraatijiyad kasta oo guddiga laga yaabo in ay u muuqdaan in miisaankoodu yahay.